बन्द कलेजहरु कहिले खुल्छन् ? पोष्ट कोभिड एजुकेशन कता जाँदैछ ? « LiveMandu
२० पुष २०७७, सोमबार २१:४३
काठमाडौं । बन्द कलेजहरु कहिले खुल्नेछन् ? बिधार्थीहरु आफ्नो करियरको खोजीमा कहिलेवाट शिक्षणसंस्थाहरुमा आवागमन गर्न थाल्नेछन् ? यो प्रश्नको जवाफ अन्यौलमा नै छ ।
कोभिडले मान्छेलाई मात्र संक्रमण गरेन कि हाम्रो शिक्षण संस्था र संरचनालाई पनि असर गरेको छ । अबको पढाई कस्ते हुने ? कसरी हुने र कुन तवरले हुने भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ ।
कलेज र स्कुल बन्द भएर घरै बसेका बिधार्थीहरुलाई प्रविधीको प्रयोगले अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै, अनलाइन मक जाँचहरु अनि अनलाइनमा नै पाठ्यक्रमका अन्य कुराहरु समावेश गरेर ई लर्निगं मार्फत अध्ययन अध्यापन गराँईदै आएको छ । यरी अनलाइन लर्निगंहरु कलेज स्वयम र अन्य बिभिन्न अनलाइन थलोहरुवाट प्रदान गरिन्छ । पोष्ट कोभिड शिक्षामा ईलर्निगंको महत्व र यस्मा बिधार्थीहरुको रुची बढेको कुरा त स्पष्ट नै छ ।
यसै क्रममा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन लर्निगं परिवार स्याटसमले कोभिड पछि अनलाइन भिडियो कक्षाहरु गर्ने अर्को सर्वाधिक रुचाइएको प्लाटफर्म नयाँ कितावसंग सम्झौता गरेको छ । सर्वाधिक धेरै नेपाली बिधार्थीहरु पढ्ने यि दुई अनलाइन थलोहरुले कोभिड पछिको अवस्थामा नेपाली बिधार्थीहरुको अनलाइन पढ्ने आवश्यक्ता र चाहनालाई पूरा गर्न यस संझौता गरेको बताए ।
पछिल्ला केहि वर्षहरु यता एमबिबिएस, इन्जिनियरिगं, नर्सिगं लाइसेन्स, व्रिज कोर्स र प्लस २ साइन्सका सबै पाठ्यक्रमहरु अनलाइन मार्फत अध्ययन अध्यापन गराइरहेको स्याटसम र कोभिड पछि बिभिन्न कोर्सहरु जस्तै केम्याट, सियूम्याट लगायत अन्य कोर्सहरु अनि किताबहरु पनि अनलाइन उपलव्ध गराउने थलो नयाँ किताबले यस संझौता गरेका हुन् । नयाँ किताबले आगामी दिनमा भिडियो लेक्चरहरु मार्फत कोर्सहरुको अध्यापन प्रतिष्ठित शिक्षकहरुद्धारा गर्ने र स्याटसमले यी कोर्सहरुको टेस्टिगं प्लायटफर्मको काम गर्ने र लेक्चर नोट्सहरु लगायत प्राक्टीस टेस्टहरु उपलव्ध गराउने बताइएको छ ।
नेपालभरिका बिभिन्न कलेज, इन्सटिट्यूट र मेडिकल कलेजहरुले स्याटसमलाई आफ्नो अध्यापन संरचनामा समावेश गरिसकेका छन् भनें नयाँ किताबले पनि बिभिन्न कलेजहरुसंग साझेदारीमा काम गर्न थालिसकेको छ । हेरौं यि दुई नेपालका लोकप्रीय ई लर्निगं प्लाटफर्महरुको यस साझेदारीले एक औसत नेपाली बिधार्थीलाई के फाइदा पुग्नेछ ?
कोभिड पछिको शिक्षालाई सहज र सुलभ बनाउन यि दुई प्लायफर्महरुको साझेदारीले बिधार्थीहरुलाई थप उर्जा दियोस् । शुभकामना ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्- लकडाउनको हल्ला चलाइयो, तर सरकार सकेसम्म त्यसमा जान चाहँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सकेसम्म लकडाउन जान नचाहेको बताएका छन् । आजै लकडाउन, भरे नै लकडाउन हुन्छ
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बनाउन फुटेर होइन, जुटेर शक्ति संरक्षण गर्दै पहिले देश, अनि मात्र आफू भन्ने भावना